Mobile House: မြန်မာ Android application များ ( update 22.11.2012 )
မြန်မာ Android application များ ( update 22.11.2012 )
မြန်မာ Android application များ စုစည်း ထားတာပါ ။
၃၄ ။ Mobile House မှ စာ များ ကို Android ဖုန်း ပေါ် က နေ ကြည့် မယ်
Mobile House လာ ရောက် လည် ပတ် လေ့လာ သူများ အဆင် ပြေ အောင် Mobile House Website .apk ကို ထုတ် ပေး လိုက် ပါ ပြီ ။
ဒီမှာဒေါင်း ပါ ။
၃၃ ။Android ဖုန်း ကို ခု မှ စသုံး လို့ မလုပ်တက် တာတွေ အများကြီး ရှိနေ နိုင်ပါတယ် ။Application and Game တွေကို ဆိုင်တွေ က ၀ယ်ရင် တစ်ခါထဲ ထည့် ပေးလိုက်တက် တယ် ။အဲ့ ထဲမှာ ကိုယ် မလို ချင် တဲ့ဟာ ပါလို့ မဖျက် တက် ရင် သုံး ဖို့ MH မလိုတာဖျက် Apps တင် ပေးလိုက် ပါတယ် ။ဖျက်တက် တဲ့ သူအနေနဲ့ လဲ အလွယ်ကူ ဖျက်နိုင်တာပေါ့ ။ မြန်မာ ဗားရှင်း ဖြစ် တဲ့ အပြင် အသုံး ပြု ရလည်း လွယ် ကူပါတယ် ။မလို ချင်တာတွေ အမှန် ခြစ် ပြီး ရွေးထား တွေ ဖျက် ရန် နိုပ် လိုက်ရုံ ပါပဲ ။
မှတ်ချက် - မြန်မာဖောင့် ထည့် ထားရမည် ။
၃၂ ။ဒါ လေး ကတော့ မိမိ ဖုန်း ရဲ့ အချက်လက် တွေ ကို စုံစုံ လင်လင် သိရှိ စေနိုင် မည့် ဆော့ဝ်လေး ပါ ။
ဖုန်းရဲ့ မော်ဒယ် တို့ rom version . cpu model , cpu frequency , resolution , .... စ တာ တွေ ကို အလွယ် တကူ သိ ရှိ စေ နိုင် ပါတယ် ။ အထူး သဖြင့် CPU ကို အမြန်နှုန်း ဘယ် လောက် ရှိ လဲ မသိ ကြ ပါဘူး ။ အလွယ် တကူ လဲ မကြည့် နိုင် ပါဘူး ။ဒီ app လေး ထည့် လိုက် ရင် အကုန် သိ ရ မှာ ဖြစ် ပါတယ် ။
၁.7day News Android Application
၃.The Voice News
၇.Myanmar HUB ဗေဒင်
၈.Myanmar HUB ပရိတ်
၁၃.Myanmar Flag Live wallpaper
၁၈.Mobile Health Guide (ကျန်းမာ ရေး ဆိုင် ရာ မြန်မာ ဗားရှင်း )
၂၀.ငတက်ပြား (Game )
၂၁. The Voice Daily (သတင်း )
၂၂. 3d မြန်မာ အလံ
၂၃. sm3 လမ်းညွှန်
၂၄. sm3 အသံထွက်ပါတဲ့ အဘိဓာန်
၂၅.go there myanmar
27.ကျွန်တော်တို့ငယ်ငယ်တုန်းက ကီးချိန်းလေးတွေနဲ့အကောင်မွေးတဲ့ ဂိမ်းလေးကိုမှတ်မိကြလား ? အခု အဲဒီဂိမ်းလေးက Android အနေနဲ့ထွက်ရှိလို့လာပါပြီ။ အပြင်မှာ အစာဖိုးမကုန်။ အကောင်လေးအီးပါရင်လည်း အိမ်သန့်ရှင်းရေးလုပ်စရာလို တဲ့ဂိမ်းလေးပါ။
28.ကျန်းမာရေးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ အချက်အလက်တွေကိုလေ့လာ မေးမြန်း လို့ရတဲ့ မြန်မာ apk ပါ
29.App Cache Cleaner (မြန်မာဗားရှင်း)
App Cache Cleaner ဆိုတာလေးက ပြောရရင် ကျွန်တော်တို့ Android ဖုန်းတွေမှာမမြင်အောင် Run နေတဲ့ App တွေကို kill ပေးတဲ့ ကောင်လေးပါ အလွန်အသုံးဝင်ပါတယ်။ပြီးတော့ ကျွန်တော် စိတ်ကူးပေါက်သွားမိတာက ခုဆိုရင် မြန်မာပြည်က User တွေ အတွက်မြန်မာစာလေးနဲ့ လုပ်လို့ရရင် ကောင်းမှာပဲလို့လေ… ကျွန်တော် နည်းနည်းကလိထားပါတယ်..လိုအပ်တာလေးတွေ ထောက်ပြပေးကြပါနော်..အသုံးပြုပြီးရင် ဘာလိုလဲ ဆိုတာကိုပေါ့အဓိက ရယ်ရွယ်ချက်ကတော့ အသက်ကြီး ရွယ်အိုလူကြီးများ အသုံးပြုနိုင်စေဖို့ ရယ်ရွယ်ပါတယ်…Software Screen Show အောက်က လင့်မှာ ဒေါင်းပါ ခင်ဗျာ
၃၀.မြန်မာပြည်ရဲ့ကား ဈေးနှုန်း အတက်အကျတွေနှင့် ကားပါမိ နှုန်းထားတွေကို update ယူပြီး offline ဖတ်လို့ရပါ တယ်
၃၃ ။ mahabote.apk ဗေဒင် ဆော့ဝ်လေးပါ
၃၄ ။ Burma News.apkhttp://www.4shared.com/android/1KT3aQWZ/Burma_News.html
ဒီ ထဲ မှာ မပါ တဲ့ ဆော့ဝ် လေး ရှိ ရင် ဆက်လက် ဝေမျှ သွားပေး ကြပါ ။
Comment မှာ ဖြစ် ဖြစ် emailကို ဖြစ်ဖြစ် လင့် လေး နဲ့ apps အကြောင်း နည်းနည်း လေး ရှင်းပြ ပြီး ရှယ် ပေး ကြ ပါ ။
Posted by Ye Yint Aung at 11:49 AM
kr.arkar November 2, 2012 at 8:09 AM
အဲ့ဒီ့ App ရှိရင်တော့ ဂျာနယ်ပေါင်းစုံဖတ်လို့ပါသေးတယ်။ တချို့ဟာတွေ ဒေါင်းသွားပြီ
နောင်နောင် December 10, 2012 at 7:53 PM
မြန်မာ Android application များ ( update 22.11.201...
sm3 အသံထွက်ပါတဲ့ အဘိဓာန်
update > Root Explorer သုံးပြီး မြန်မာဖောင့် သွင်း...
HTC Desire C Root လုပ်နည်း
Samsung Galaxy S I9070 Advance Root လုပ်နည်း
Acer Liquid Mini E310 root လုပ်နည်း
Acer Iconia Tab a700 / 701 Root လုပ်နည်း
Iconia Tab A500/A501/G100W/A510/A511 Root လုပ်နည်...
Sony Xperia Miro ST23 / ST23i Root လုပ်နည်း